【NO.1 indlu yokuphupha kaSarah】isidlo sakusasa sasimahla kunye nokuyithatha - I-Airbnb
【NO.1 indlu yokuphupha kaSarah】isidlo sakusasa sasimahla kunye nokuyithatha
Igumbi lakho lokulala e indawo yokuhlala nenesidlo sakusasa sinombuki zindwendwe onguTaylor
Indawo yokuqala yokuhlala yaseTshayina yaseChurchill, indawo yokuhlala yaseTshayina, indlu ihonjiswe ngokufudumeleyo, kwaye kukho iintlobo ezininzi zezindlu.Ibonelela ngamagumbi amakhulu kunye amancinci osapho, alungele abahambi beqela! Indawo izolile kwaye ifanelekile ukuhlala. Iibhere zePolar zihlala ziza apha. Indawo ye-aurora igqwesile kwaye ungonwabela i-aurora kwithafa lakho. Kukho iindawo zokutyela, iivenkile, iiofisi zeposi, iibhanki ezikufutshane, imizuzu eyi-10-15 kuphela ngeenyawo! Isidlo sakusasa sasimahla, sithathelwe simahla kwisikhululo sikaloliwe! Nika ikhitshi, izinto zasekhitshini, kunye neziqholo zaseTshayina. Unokuziphekela ukutya kwakho, ugcine iindleko zokuhamba kwaye utye kamnandi ngaxeshanye! Ukuba unayo nayiphi na imibuzo malunga nokubhukisha imoto yeTundra okanye eChurchill, ungaqhagamshelana nathi kwangethuba, kwaye siya kuzama konke okusemandleni ethu ukukunceda uphendule imibuzo yakho. Wamkelekile wonke umntu ukuba andwendwele iChurchill, siya kukubonelela ngeyona nkonzo ilungileyo kwaye uzive usekhaya!
I-B&B yamaTshayina ibonelela ngenkonzo yesikhokelo ngesiTshayina Ukuba unexhala malunga neengxaki zonxibelelwano ngolwimi, okanye ufuna ukwazi ngakumbi ngeChurchill, kodwa ulahlekile, yiza kuthi kangangoko kunokwenzeka! Siya kukwazi le uhambo for abakhenkethi ngokweemfuno zabantu. Asiyi sincome ezinye izinto ezingenamsebenzi neyilahleko kuwo wonke umntu. Siza kuzama konke okusemandleni ethu ukuze uncedo wonke ukuchitha imali ubuncinane kwaye wonwabele mnandi kakhulu. Oku kwakhona Homestay wethu Chinese. Apho kaThixo uxanduva lwakho!
Wi-Fi-Free Wi-Fi iyafumaneka kuyo yonke indlu
Ikhitshi-Iindwendwe zingasebenzisa i-tableware, izitya kunye nezixhobo zokupheka ukupheka okulula.
Isikhenkcisi-kwiindwendwe ukugcina ukutya okonakalayo.
Umnyango wegumbi lokulala unokutshixwa ukhuseleko kunye nobumfihlo.
Umatshini wokuhlamba / umatshini wokomisa-15CAD ngentlawulo (ukuhlamba + ukomisa)
I-Dream House ayithethi ukuba bubunewunewu kangakanani, liphupha nje lam nomfazi wam.Noko ke, ukucoceka nokukhuthala yeyona nto inkulu kwi bnb yethu, wamkelekile kwi bnb yethu.
Sinesidlo sakusasa sasimahla kwaye Sibonelela ngekhitshi kwiindwendwe zethu, ungaziphekela ngokwakho, Ngale ndlela, ungatya okumnandi kwaye ugcine iindleko.
Ukuba ufuna ulwazi malunga nokhenketho lwebuggy, ukhenketho lwasekhaya ……singakunika lona.
Ngoxa le ndlu isabelwa nezinye iindwendwe, igcinwa icocekile yaye izolile.
I-Wifi- I-wifi yasimahla kuyo yonke indlu
Ukupaka- Indawo yokupaka yasimahla
Ikhitshi- Iindwendwe zinokufikelela kuzo zonke izitya, izixhobo kunye nezinto zokupheka zokupheka lula nje ukuba zicocwe emva koko.
Isikhenkcisi-Ukuze iindwendwe zigcine izinto ezitshabalalayo
Tshixa kucango lwegumbi lokulala-Igumbi labucala elinokuthi litshixelwe ukhuseleko kunye nokuba bucala.
Iwasha/Isomisi-Ukufikelela kunokunikezelwa ngomrhumo we-15CAD ngomthwalo ngamnye (uhlambe kwaye womise)
Indawo yokuhlala yaseTshayina ibekwe kufutshane nolwandle Ngexesha leBeluga ngo-7.8, unokuthatha usapho lwakho kunye nabahlobo kwaye uthathe uhambo oluselwandle ngexesha lakho lokuphumla. Indawo entle kakhulu. I-churchill i-ovaloli encinci, ungaya kuzo zonke iikona ngeenyawo, kwaye akukho ngxaki yokuphazamiseka kwezothutho! Kwaye ngexesha lebhere, kukho ithuba elikhulu lokuza kweebhere ezimhlophe! Le ikwayintliziyo yabahlali abaninzi, kodwa kukho abantu abazingcaphephe ekuqhubeni iibhere edolophini, ke ukhuseleko luqinisekisiwe!
Indlu yethu ikufuphi nolwandle, Ngexesha lakho, ungaya apho kunye nosapho lwakho okanye nabahlobo bakho.Ungabona nezilwanyana, nkqu neebhere ezimhlophe.Yiloo nto wonke umntu ujonge phambili kuyo!!kodwa ke, idolophu inomsebenzi wamapolisa ojikeleza iiyure ezingama-24 ukuqinisekisa ukhuseleko!
Umbuki zindwendwe ngu- Taylor
Samkela ngokunyanisekileyo wonke umtyeleli okhetha ibnb yethu Ibnb yethu isingathe iindwendwe ezisuka kwihlabathi liphela.
Ukuthatha simahla. Indlu yam ikufuphi nolwandle, ungahamba uye kuyo yonke indawo.
Nangona i-bnb yethu ingekho tofotofo, kodwa umamkeli ngoyena unomdla kwaye siyicoca kaninzi ngemini, Ukuqinisekisa ngokugqibeleleyo ukucoceka.
wamkelekile kwi bnb yam.
Ukuba ufuna ulwazi malunga nokhenketho lwebuggy, ukhenketho lwasekhaya, ukuqasha imoto ……singakunika yona.
Sinesidlo sakusasa sasimahla kwaye Sibonelela ngekhi…
Iilwimi: 中文 (简体), English, Русский